Ukubalulwa kwemveliso egqwesileyo yomvelisi wegesi we-50KW LPG kunye neFektri | Naipute
Umzekelo weGenset I-50 GFT
Ikaliwe Amandla (kW / kVA) 50 / 62.5
Ikaliwe ngoku (A) 90
Dimension Ngokubanzi (L * W * H) (mm) 2100 * 800 * 1600
Ubunzima bomzimba (kg) 1150
Umzekelo NY52D6TL (Itekhnoloji ye-AVL)
Inani leSilinda 4
Wazala * Stroke (mm) 112 * 132
Ukufuduswa okupheleleyo (L) 5.2
Ikaliwe Amandla (kW) 60
Ioyile (L) 13
Umzekelo 50KZY, uphawu lweNPT
Ukusebenza kakuhle (%) 88.6
Injini yegesi yinjini yeinjini.
Injini yeinjini yeinjini (injini yeinjini yerhasi okanye injini yeinjini yokuvutha), okanye injini yegesi, luhlobo lweinjini zenjini yobushushu. Iinjini zerhasi inokuba ligama elisetyenziswa ngokubanzi. Imigaqo yayo esisiseko iyafana, kubandakanya iiturbine zerhasi, injini yejet njalo njalo. Ngokubanzi, injini yeinjini yerhasi isetyenziselwa iinqanawa (ikakhulu iinqanawa zokulwa zomkhosi), izithuthi (zihlala zinkulu ngokwaneleyo ukulungiselela iiturbines zerhasi, ezinje ngeetanki, izithuthi zobunjineli, njl.njl.), Iiseti zomvelisi, njl. Ukuqhutywa, iiturbine ziqhuba kungekuphela nje isiguquli, kodwa neshafti yokuhambisa, edibene nenkqubo yokuhambisa isithuthi, isihambisi okanye umvelisi wenqanawa.
Umgaqo wokusebenza olula kukuba isilinda nganye yeenjini ezine zedizili enesibetho inemivimbo emine yokugqibezela umjikelo wokusebenza wokutsala ukonyusa inaliti yokutsha. Ubume obunye besilinda yeinjini yedizili ikakhulu ibunjwe ngesilinda, ipiston, intonga yokuqhagamshela, i-crankshaft, i-valves yokutya kunye neyokukhupha, i-injor ye-fuel kunye nepayipi yokukhupha kunye neyokukhupha. I-piston ibaleka amatyeli amane ukusuka phezulu kuye ezantsi kwisilinda ukugqibezela umjikelo osebenzayo, wenze umsebenzi omnye, kwaye i-crankshaft ijike kabini. Ukwenza isantya sizinze, inertia flywheel icwangciselwe ukuphela kwe-crankshaft ukuphelisa ukunyuka kwesantya okubangelwa ngumsebenzi wokutshiza
Egqithileyo Ukubalulwa kwemveliso yomvelisi wegesi we-30KW LPG
Okulandelayo: Ukucaciswa kweMveliso ye-100KW LPG yeGesi yeJenereyitha